Dhegyaso idaacadayada Ku cusub Iswiidhan
Miyaad timi Iswiidhan kana timi dal kale? Dhegayso idaacada Ku cusub Iswiidhan oo hel talooyin ku saabsan sida ay u shaqayso shaqada iyo waxbarashada gudaha Iswiidhan, sida aad u qorayso codsi shaqo oo fiican iyo sida aad isagu diyaarinayso wareysi shaqo.
Dhegeyso Podka Ny i Sverige
Siyaabo kale oo loo dhegeysan karo
Waxaad qaybaha idaacadan ku dhegaysan kartaa Iswiidhish fudud, carabi, faarsi iyo ingiriisi.
Waxaad idaacadan si toos ah uga dhegaysan kartaa kombiyuutar. Haddii aad donaysid inaad ka dhegaysato telafoonkaaga casriga ah ama shaashada yar waxaad soo dejisan kartaa aab-ka podcast. Adiga ayaa dooranaya nooca aabka aad doonaysid inaad isticmaasho, tusaale ahaan Apple Podcasts, Spotify ama Castbox.
Isu diiwaan-geli idaacada Ku cusub Iswiidhan
Waxaad isu diiwaan-gelin kartaa idaacadayada. Markaad is diiwaan-geliso waxaa kuu soo galaya dhamaan qaybaha cusub dhanka kambiyuutarkaaga, telafoonkaaga casriga ah ama shaashada yar. Dhag ka sii badhanka is diiwaan-gelinta ee idaacada markaad isticmaalayso. Dhag ka sii halka ay ku qorantahay: : ”Följ”, ”Follow” ama ”Prenumerera”.
Maxaad doonaysaa inay ku saabsanaato idaaacada Ku cusub Iswiidhan?
Fadlan noo soo dir ii-mayl haddii aad hayso talooyin ku saabsan arimaha aad is leedahay way ku haboonyihiin.